SmCo चुम्बक - चीन Ningbo नहुनु
SmCo चुम्बक दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बक को दोस्रो पुस्ता हो, एक उच्च-क्षमता स्थायी चुम्बक Sm, सह, फे र अन्य ट्रेस धातु तत्व बाट बनेको छ। 300 ℃ को एक अधिकतम काम तापमान बाहेक, यो जंग र ओक्सीकरण विरुद्ध उल्लेखनीय प्रतिरोध छ। त्यसैले, अरूलाई aomng aeronautic र ठाउँ उद्योगहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। विभिन्न आकारहरू मा SmCo5 र Sm2Co17 चुम्बक विनिर्माण। धेरै ग्राहकहरु ग्रेड YXG28, YXG30, YXG32, SmCo28, SmCo30, SmCo32, आदि यन्त्र र tolerances हामी आवश्यक ...
SmCo चुम्बक दुर्लभ पृथ्वी को दोस्रो पुस्ता हो स्थायी चुम्बक , उच्च-क्षमता स्थायी चुम्बक Sm, सह, फे र अन्य ट्रेस धातु तत्व बाट बनेको छ। 300 ℃ को एक अधिकतम काम तापमान बाहेक, यो जंग र ओक्सीकरण विरुद्ध उल्लेखनीय प्रतिरोध छ। त्यसैले, अरूलाई aomng aeronautic र ठाउँ उद्योगहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
विनिर्माण SmCo5 र Sm2Co17 विभिन्न आकारहरू मा चुम्बक। धेरै ग्राहकहरु ग्रेड YXG28, YXG30, YXG32, SmCo28, SmCo30, SmCo32, आदि आवश्यक
हामी काटन वा सुपर abrasives संग पीस द्वारा आयोमी आकार र सहिष्णुता हासिल। सामारियम कोबाल्ट (SmCo) प्रक्रियाहरू खोल्दै वा मिलिंग, पारंपरिक ड्रिलिंग संग जमीन गर्न सकिँदैन, र तिनीहरूले magnetized अघि Machined हुनुपर्छ। यसबाहेक, ठूलो वा जटिल सम्मेलन सामान्यतया विधानसभा गर्न पूर्व magnetized छन्। सामारियम कोबाल्ट चुम्बक लागि मानक tolerances छन् +/-। 005 "जमीन आयाम लागि। हामी आकार र ग्रेड को एक किसिम मा ब्लक, घन्टी र डिस्क फारममा SmCo चुम्बक स्टक, र हामी पूर्णतया भनेर आवश्यक आकार र सहिष्णुता उत्पादन सुसज्जित छन्।
1:5मिश्र धातु सामाग्री
1:522 MGOe प्रस्ताव 16 MGOe (ऊर्जा उत्पादन) र लगभग 50% सामारियम र 50% कोबाल्ट अप गरेको छ। 1:5श्रृंखला अधिकतम 250 ° C को सिफारिस सञ्चालन तापमान छ। SmCo 1:5चुम्बक या खींचना गर्न 2:17 सामाग्री भन्दा कम क्षेत्र तागत चाहिन्छ। केही उदाहरणहरू मा, 1:15 सामाग्री धेरै डंडे संग magnetized हुन सक्छ, एक magnetizing दृढता उपलब्ध छ कि प्रदान।
2:17 मिश्र धातु सामाग्री
2:17, 32 MGOe 24 MGOe प्रदान गर्दछ र% 25 सामारियम, 5% तामा, 18% फलाम, 2% हाफनियम वा Zirconium बनेको छ शेष रहेको कोबाल्ट संग। को 2:17 श्रृंखला 350 ° C अधिकतम परिचालन तापमान छ। 2:17 को विशेष ग्रेड जो उच्च तापमान पनि गर्न सञ्चालन गर्न सक्छन् उपलब्ध छन्। SmCo 2:17 अत्यन्तै उच्च magnetizing क्षेत्रहरू आवश्यक छ, र धेरै पोल चुम्बक सम्भव छैन।
खुला र डाउनलोड SmCo चुम्बक को प्राविधिक डाटा
आधार चुम्बकीय सम्पत्ति
SmCo चुम्बक VS Sintered निओडाइमियम चुम्बक
आधार चुम्बकीय सम्पत्ति:
अधिकतम काम तापमान: 250-350 ° C
अधिकतम ऊर्जा उत्पादन: (Bhmax) (15-35 MGOe)
प्रेरणा Coercive बल: (Hcb) 4-12 (Koe )
अवशिष्ट चुम्बकत्व: BR 0.8-1.2 (टी)
अवशिष्ट चुम्बकत्व को उल्टाउन तापमान गुणांक (Br) -0.04 - -0.01
1 उत्कृष्ट Coercity
2. नाइस तापमान स्थिरता
3. कोबाल्ट को संवेदनशीलता मूल्य कारणले, यसको मूल्य महँगो र उतार चढाव गर्न सजिलो छ
सामारियम कोबाल्ट स्थायी चुम्बक को उत्पादन प्रक्रिया:
पाउडर प्रक्रिया → चुम्बकीय गुण परीक्षण → काटन → उत्पादन समाप्त → → sintering बढ्न
सामारियम कोबाल्ट सामाग्री सामान्यतः, संयुक्त राष्ट्र-magnetized परिस्थितिमा प्रक्रिया हीरा पीसने पाङ्ग्रा र भिजेको ठीक पीस, आवश्यक छ जो संग। कम ज्वलन तापमान को, सामारियम कोबाल्ट पूर्ण सुक्खा हुनु हुँदैन। एउटा सानो स्पार्क वा उत्पादन मा स्थिर बिजुली सजिलै आगो, नियन्त्रण गर्न कठिन छ, जो अत्यन्तै उच्च तापमान, संग ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ।
सामारियम कोबाल्ट चुम्बक भंगुर छन्। जब तिनीहरूलाई सामना कृपया कृपया आफ्नो आँखा, औंलाहरु र शरीर रक्षा।
SmCo चुम्बक र Sintered NdFeB चुम्बक बीच मतभेद मुख्य रूप निम्न अंक समावेश:
1. चुम्बकीय शक्ति
निओडाइमियम स्थायी चुम्बक थप शक्तिशाली चुम्बकीय शक्ति मा SmCo चुम्बक भन्दा छ।
(BH) Sintered NdFeB को अधिकतम गर्दा SmCo सामाग्री को (BH) अधिकतम 32MGOe छ, माथि 53MGOe छ।
SmCo सामाग्री NdFeB सामाग्री भन्दा demagnetization प्रतिरोध बलियो छ।
NdFeB उच्च तापमान प्रतिरोध मा SmCo रूपमा उच्च छैन। NdFeB अधिकतम काम तापमान 200 ℃ छ र SmCo को अप 350 ℃ छ।
NdFeB चुम्बक ओक्सीकरण र जंग प्रतिरोध राम्रो छैन। सामान्यतया तिनीहरूले चढाना वा निर्वात पैकिंग सुरक्षित गर्न छ। कोटिंग को सामान्य प्रकार जस्ता, निकल, epoxy र अरूलाई समावेश गर्नुहोस्। SmCo चुम्बक चढाना बिना rusting गरिनेछ।
4 आकृति, प्रशोधन र assembling
NdFeB र SmCo दुवै नाजुक सामाग्री हो, त्यसैले तिनीहरू साधारण काटन प्रक्रिया द्वारा निर्मित गर्न सकिन्छ।
सामान्य प्रक्रिया विधि तार-इलेक्ट्रोड काटन र हीरा पाङ्ग्रा काटन छ। त्यसैले यी चुम्बक को producible आकारहरू सीमित छन्। धेरै जटिल आकारहरू व्यावहारिक छैन। अपेक्षाकृत बोल्ने, SmCo सामाग्री थप नाजुक छ र थप सजिलै तोड्न। त्यसैले, कृपया कोडांतरण र SmCo चुम्बक प्रयोग गरेर धेरै सावधान।
केही वर्ष पहिले, SmCo चुम्बक को मूल्य दुई पटक वा अझ NdFeB चुम्बक को भन्दा थियो।
हालैका वर्षहरूमा NdFeB को मूल्य कारण दुर्लभ-पृथ्वी खानी मा देशको बन्देज उपाय गर्न निकै पुगेको छ। मूलतः साझा NdFeB चुम्बक सामारियम कोबाल्ट भन्दा सस्ता छन्।
अघिल्लो: AlNiCo चुम्बक
अर्को: Sintered निओडाइमियम चुम्बक
उच्च तापमान चुम्बक